Maraoka: Tsaratsara kokoa ve ny Fanabeazana Mitambatra? · Global Voices teny Malagasy
Maraoka: Tsaratsara kokoa ve ny Fanabeazana Mitambatra?
Voadika ny 17 Oktobra 2018 12:30 GMT
Vakio amin'ny teny 日本語, Português, Deutsch, 繁體中文, 简体中文, English
(Fanamarihana! lahatsoratra nivoaka tamin'ny Aogositra 2007)
Tsaratsara kokoa noho ny sekoly natokana ho an'ny ankizivavy sy ny ankizilahy fotsiny ve ny fanabeazana mitambatra? Ato amin'ity lahatsoratra nadikako avy amin'ny teny Arabo ity, mizara amintsika ny fahiratantsainy i Mohammed Saeed Hjiouij, blaogera Maraokana .
Manoratra i Hjiouij:
في السنة الثانية تقرر تغيير النظام، وصرنا ندرس في فصول مختلطة. لكم أن تتوقعوا التطور الصاروخي لجميع التلاميذ: لم تعد الإمتحانات مجرد واجبات يجب القيام بها، بل فرصة للتسابق بين الذكور والإناث. نتائج كل إمتحان جديد تأتي أفضل من سابقه (كانت تلك السنة هي بداية تفوقي في اللغة الفرنسية، قبل أن أتراجع عنها في مرحلة لاحقة 🙂 ).
Ao amin'ny rafi-pampianarana Maraokana, misy fotoana maharitra hatramin'ny telo taona antsoina hoe fampianarana manelanelana eo amin'ny fanabeazana fototra (enintaona) sy ny fampianarana amin'ny ambaratonga faharoa (telo taona). Tany aminà sekoly vao nosokafana aho no nandany ireo telo taona ireo ary ny taona voalohany nisokafany no taona nidirako tao. Nandritra ny taona voalohany, nianatra tany amin'ny kilasy natokana ho an'ny lehilahy fotsiny aho – tany amin'ny antokony iray ireo ankizilahy ireo ary ny vehivavy tany amin'ny antokony iray hafa. Tsy fantatro na fanapahankevitra noraisin'ny tale izany na baiko avy amin'ny minisitera. Nandeha tsara ny taona ary saika antonony avokoa ny vokatra. Midika izany fa nahafeno ny farany kely indrindra tamin'ireo zavatra takian'ny kilasiny ireo mpianatra.
Nandritra ny taona faharoa, nisy fanapahankevitra natao mba hanovana ny rafi-pampianarana ary nanomboka nianatra tao anatin'ny tontolo mifangaro izahay. Tokony nahita ny fandrosoana tao amin'ny vokatra azon'ireo mpianatra ianao: tsy raharaha intsony ihany ny fanadinana tamin'izany. Hho an'ny ankizilahy sy ny ankizivavy, lasa fahafahana iray hifaninana ny fianarana. Tsaratsara kokoa noho ny fanadinana teo alohany hatrany ny fanadinana vao natao. Izany no taona tena nahafehezako tsara ny teny Frantsay mialohan'ny nahavoaray ahy tamin'ireo taona manaraka 🙂 Nitohy hatramin'ny taona manaraka ilay fironana. Nirehitra teny aminay rehetra ny afon'ny fahavitrihana.
Na izany aza, tamin'ny ambaratonga faharoa, niova daholo indray ny zava-drehetra. Noho ny fahasarotana tao amin'ny taranja manokana nosafidiako, vitsy ny isan'ny mpianatra tao amin'ny kilasiko. Noho izany, mbola vao miha kely ny isan'ny vehivavy. Niteraka fihenan'ny fifaninanana izany, na fanjavonany mihitsy aza.
Raha tiako ny hamintina aminà fehezanteny tokana ity adihevitra ity, izao no mety ho ambarako: mandrisika ny mpianatra hiatrika ny fianarna amin'ny fomba mahomby ny fanabeazana mitambatra, amin'ny fandrantovana fahalalàna fa tsy amin'ny fanaovana tsianjery ny pejim-boky torolàlana. Midika izany fa lasa azon'ny rehetra tanterahana ny ho mamiratra